Cab oo Wada | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Sababo dhawr ah ayaa sababi kara shilalka ka dhaca wadooyinka u dhexeeya wadooyinka xun xun ilaa cimilada xun. Si kastaba ha noqotee, ku kaxaynta khamriga ama daroogooyinka kaleba waa sabab caadi ah oo shilalka si fudud looga hor tagi karo iyadoo la adeegsanayo xoogaa is-xakameyn ah.
saamaynta aalkolada ama daroogooyinka kale
sababta guud ee shilalka
Haddii aad waligaa naftaada ku aragto xaalad noocaas oo kale ah, waa inaad qabsataa qareen shil baabuur ku sakhraansan oo jooga Dubai si looga fogaado masiirka ugu xun.
U dulqaadasho aan xad lahayn oo ku sakhraansan darawalnimada UAE
UAE, wadista gaari walxaha maandooriyaha ah sida aalkolada ama daroogooyinka kale waa dambi maxaa yeelay waxaa jira siyaasad aan dulqaad lahayn oo loo dulqaatay. Xaqiiqdii, xitaa cabitaanka dadweynaha waxaa loo arkaa sharci darro.
Markaa, dacwad oogaha guud wuxuu fayl garaysan karaa dacwad ka dhan ah darawalka sakhraanka ah xitaa haddii heerka aalkolo lagu arko ee jirka ku jira aan la dafiri karin. Shuruucda adag ee noocan oo kale ah ayaa loo dhaqmaa si loo yareeyo heerka shilalka shilalka wadida ee sanadkii.
Xaqiiqdi, dadka ku lugta leh shilalka wadida sakhradda waxay doortaan inay wax cabbaan oo kaxeeyaan xitaa markay ogaadaan cawaaqibta ay la kulmi karaan iyo waxyeelada ay u geysan karaan. Markaa, dawladdu uma dulqaadanayso wadayaasha sakhraansan.
Sida loo helo laysanka khamriga ee Dubai
Waxaad ka heli kartaa laysanka khamriga gudaha Dubai hadaadan muslim aheyn. Si kastaba ha noqotee, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:
Waa inuu ka weynaado 21 sano
Waa inuu kasbadaa ugu yaraan mushahar bille ah oo ah 3,000
Waa inuu haysto fiiso deganaansho
Muslin ma ahan
Foomamka dalabka waxaad ka heli kartaa websaydhyada Badda iyo Baddaha Caalamiga ah ama Afrikaanka + Bariga ama ka heli kartaa nuqulada adag ee dukaamada. Marka laga reebo buuxinta foomka, dukumiintiyada soo socda waa in la soo gudbiyaa:
Koobiga baasaboorka, heshiiska kireysiga, fiisada deganeyaasha
Sawirada cabirka baasaboorka
Lacagta khidmadda ah ee Dh 270 ama waxa lagu dabaqi karo muddada gudbinta
Nuqul ka mid ah qandaraaska shaqada oo ay wasaaraddu soo saartay labadaba Ingiriis iyo Carabi
Xaalada lammaanaha isqaba, ninku kaliya ayaa xaq u leh inuu dalbado mooyee haddu naagtu ka helin NOC ninkeeda. Dadka iskood u shaqeysta sidoo kale waa inay soo gudbiyaan nuqul shatiga ganacsigooda. Si aad u hesho rukhsadda shirkaddaada, labadaba loo shaqeeyaha iyo codsaduhu waa inay saxeexaan oo ay shaabadeeyaan codsiga. Caadi ahaan, dalabka waxaa laga baaraandegi doonaa labo toddobaad ka yar.
Waa maxay ciqaabta cabitaanka iyo wadista Dubai?
Ciqaabta cabitaanka iyo wadista Dubai waxay soo jiidan kartaa ganaax u dhexeeya AED 5,000 ilaa AED 50,000, xabsi illaa 1 iyo 3 bilood, ama labadaba. Intaa waxaa sii dheer, liisankaaga wadista ayaa laga noqon karaa ama laga qaadi karaa ugu badnaan laba sano. Xitaa waad waayi kartaa shaqadaada si waafaqsan qodobka 120 ee Sharciga Shaqada UAE.
Cab oo kaxee ciqaabta
Waxay kuxirantahay darnaanta shilka, qofka ku lug leh shilka gaari wadida sakhradda wuxuu ku dhici karaa cawaaqib xumo wuxuuna baabi'in karaa shaqadiisa. Sida kaliya ee loo yareyn karo burburka ayaa ah in la raadsado caawimaad xirfad-yaqaan. Qareenka shilka wadida ee sakhraansan ayaa badbaadin kara haddii shilka uusan khaladkaaga ahayn oo aad u yeelatid dhinacyada kale ee mas'uulka ka ah ee si toos ah ama si aan toos ahaynba u leexiyay eedda si ay u ilaaliyaan.
Waxaan ku siin karnaa dhammaan hagida iyo talooyinka loo baahan yahay
Garyaqaanadayada ayaa la heli karaa 24ka saacadood maalintii, toddobada maalmood ee usbuucii si lagaaga caawiyo kiiskaaga.